Mutungamiriri Charles akazoona muzukuru wake Archie, mutauro weTELES RELAY
HOME » VANHU & VANHU Mutungamiri Charles akazoona muzukuru wake Archie, shoko renyoro
Prince Charles inofadza! Tateguru weArchie, mwana we Meghan Markle bv Du mutungamiri Harry, akazosangana nemzukuru wake. Maererano nemashoko kubvaEntertainment Tonight, baba veDuke weSussex akashanyira mwana wamambo, mangwanani 16 may. Imwe nguva inonyanya kukosha kuna Prince Charles, uyo aida chaizvo kuwana chiduku chekbage. Vakuru vamambo vamambo vakapinda pakuberekwa kwezukuru vake: "Hatigone kufadzwa nemashoko aya uye hatigoni kumirira kusangana nomwana patinodzoka", akadaro, akataurwa nezvake VANHU. Kushanyira kunoitika mazuva maviri chete pashure prince William with Kate MiddletonpaFrogmore Cottage muWesternsor.
"Rudo rusingaverengeki". Izuva rakakura Ilona Smet. Chishanu chingave 17, mwanasikana mukuru we David Hallyday Anopemberera 24th kuberekwa kwake. Uye pazuva rinokosha mai vake, Estelle Lefebure, akamutumira shoko rakanaka kwazvo rakazadzwa nounyoro pamashoko ake Instagram. "Makore 24 apfuura, ndinosvoda kutsvoda kwangu pachikutanga chedu shamwari yangu"Saka wakatanga wekare-mufananidzo, nhoroondo yevamwe mifananidzo yakaita nyemba uye yakayeuka yemufananidzo, iyo inoratidza amai vavo-mwanasikana. "Happy birthday moyo wangu @ilonasmet. Saka vanozvikudza pamusoro penyu. Ndinokuda, akagumisa, asati awedzera hashtag, "Kuzvikudza kuva amai vako".
Michèle Torr ane akaparadzaniswa naJean-Pierre mushure memazana e25 e rudo. Muimbi Mick Micheyl, "mwarikadzi" we Laurent Gerra, akafa pamakore 97. ari mhuri kufamba de Vincent Cassel et Tina Kunakey pamwe nemwanasikana wavo Amazon paCroisette.
Mutungamiri Charles akazoona muzukuru wake Archie, shoko renyoro reEstelle Lefebure kuna Ilona Smet: ose makuru e17 May